12 Xeer Oo Cilmiga Nafta Ah | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Khaalid Caskar — January 16, 2020
12 XEER OO CILMIGA NAFTA AH – AKHRI!
1. Xeerka Raaxada Nafta – In aad meelaha fawdada ah iskaga cararto, qiimaheedu aad buu u sarreeyaa! Naftaada haku cabudhin meel fawdo ah, oo aanay doonayn.
2. Xeerka Maskax-badnaanta – Iska-dhaga marka dadka qaar, iyo in aanad qofna ka waynaysiinin muggiisu, qof kasta waxa uu kuu muujinayaa waxa uu yahay. Marmarka qaar is-dhaga mar!
3. Xeerka Kaaftoonka – Wax kasta oo aad ka kaaftoonto maad khasaarin, waxyaabaha qaar in aad faraha ka qaaddaa waa BILOW WANAAGSAN!
4. Xeerka Horumarinta Nafta – Naftaada xagga sare, iyo martabad fiican u baadh-baadh. Dabaqadda hoose ee noloshu waa buuqe!
5. Xeerka Sugidda Nafta – Marar badan dadka u sheeg xeerarka iyo hab-dhaqankaaga, ilaa aad noqoto qof dadku si fiican u wada garanayaan, oo aan waxyaabaha qaar loola iman!
6. Xeerka Heer-sarenimada – In aad hab cusub nolosha ku soo kordhisid, oo dadka oo dhamina ay kugu daydaan, waa heer-sarenimo!
7. Xeerka Caraynta! – In aad dadka kaa waawayn, ee kaa mansabka iyo derajada sarreeya boos ku dhex samaysato, dadkuna ay kuu aqoonsadaan qof intiisa ka wayn, waa caraynta filkaaga!
8. Xeerka Maamulidda Waqtiga – Noqo sida doonta, mawjadaha iyo dabaylaha dhexdooda maskaxda iyo aqoonta ku socota, ee aan bilaa jihada ahayn!
9. Xeerka Yoolasha/Ahdaafta – Nolol bilaa hadaf ahi waa sida jidh bilaa naf ah. Garo wax kasta oo aad samanaysid sababta aad u samanaysid!
10. Xeerka Dhug-yeelashada – Haddii aad haleeli waydo, oo garan waydo khaladaadkaaga, waligaa sida saxda ah baran maysid.
11. Xeerka Waxbarashada – Adiga oo aan dhibtoon, waxba ma baranaysid. Waxbarashadu waa jihaad!
12. Xeerka Is beddelka – Haddii ay is beddeli waydo noloshaadu, oo aad hal meel uun taagnaato, si uunna u fekerto, khasaare ayaad ku sugantahay!
Tags: 12 Xeer Oo Cilniga Nafta Ah
Next post Baroortii, Khuraafaadkii Faafey iyo Masiibadii Bilaa Magaca Aheyd!
Previous post Hablihii Qayiley, shiishaddana Cabbey!